Diyaarad millatari oo Mareykan ah ayaa ku burburtay Afgaanistaan. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Diyaarad millatari oo Mareykan ah ayaa ku burburtay Afgaanistaan.
Baadhitaan ayaa socda si loo go’aamiyo waxa sababay in diyaarad militeri Mareykan ah ay ku burburto gobolka Ghazni ee Afghanistan Isniintii, afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka ee Afgaanistaan ​​ayaa xaqiijiyay shilkaaasi, isagoo intaas ku daray inaysan jirin wax muujinaya “diyaaradda” oo ay ku dhacday gacanta cadawga ku ah culimada Mareykanka ee fadhigooda yahay dalkaasi.
“Diyaarad dagaal oo laga leeyahay ee Mareykanku oo nooceedu yahay E-11A ayaa ku burburtay maanta gobolka Ghazni, Afganistan. In kasta oo sababta shilka uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo, ma jiraan wax muujinaya in burburka uu sababay dabka cadowga. Waxaan bixin doonnaa macluumaad dheeri ah inta ay diyaar tahay,” ayuu yiri af hayeen u hadlay ciidanka mareykanka ee howl galka ujooga afganistan.
Taliyuhu wuxuu intaa ku daray in diyaarado dheeri ah oo ay soo dhaceen been abuur yihiin.
CNN ayaa werisay horaantii Isniinta in ciidamada Mareykanka ay baarayaan warbixinno ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka Ghazni ee Afghanistan, sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah.
Sarkaalku kuma dari karin faahfaahin dheeraad ah.
Warbixinno badan ayaa soo baxay oo ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay gobolka, kaas oo ay si weyn u maamuli jireen Taliban oo ku yaal koonfurta-galbeed ee caasimada Afgaanistaan ​​ee Kabul.
Xoghayaha Difaaca Mark Esper ayaa sheegay Isniinta “inuu ka warqabo xaaladda” laakiin faahfaahin dheeraad ah kama bixin karin , isagoo leh “ma haysto wax dheeri ah oo la igu soo wargaliyo waqtigan.” Esper wuxuu xaqiijiyey in Pentagon-ka ay cusbooneysiin doonto warbaahinta marka “are into ku horumar”.
E-11A waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro ciidamada garoonka dhexdiisa iyo xarunta waxaana horey u qeexey duuliyeyaasha ciidamada Cirka “WiFi cirka.”
Waxay u shaqeysaa qayb ka mid ah Isgaarsiinta Cirka ee Hawada Duulista Hawada ee Node (BACN), oo loo sameeyay ka jawaab celinta dhibaatooyinka isgaarsiinta intii lagu jiray Howlgalka Red Wings, howlgalka ciidamada Mareykanka ee gobolka Kunar, Afghanistan, 2005, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay daabaceen sanadka 2018.
Hawlgalkii 2005 wuxuu ku lug lahaa afarta nin ee roondada Navy SEAL oo roondeyn ah lagu sameeyay. Saddex ka mid ah SEALs ayaa la dilay iyo helikabtar MH-47 Chinook ah oo watay ciidanka badbaadinta si loo soo rogo roondada ayaa la toogtay, halkaas oo lagu dilay sideed SEALs iyo sideed ka tirsan Howlgallada Gaarka ah ee Ciidamada.
Sababo la xiriira dhulka buuraleyda ah ee Afgaanistaan ​​iyo la’aanta kaabayaasha isgaarsiinta ee jira awgeed, caqabado dhanka isgaarsiinta ah ayaa ka hor istaagay afarta nin ee roondo roondeynta ah inay xiriir la yeeshaan xaruntooda howlgalada, taasoo uga dhigeysa inay u nugul yihiin weerarada ay ku dhinteen 19 ka mid ah howlgalada gaarka ah ee ciidamada. , ayaa lagu yidhi.
Inta u dhaxaysa 12,000 iyo 13,000 oo ciidamada Mareykanka ah ayaa haatan ka howlgala Afgaanistaan ​​taas oo qayb ka ah howlgalka Mareykanka hogaaminayo ee NATO si ay u tababaraan, u caawiyaan ugana tashadaan ciidamada Afghanistan.
Waxaa jiray inka badan 2,400 oo dhimasho ah xubnihii adeega Mareykanka tan iyo markii uu biloowdey dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka 2001. Sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa shanta sano ee Mareykanka ka dhaca Afgaanistaan, iyadoo 23 xubnood oo adeegayaal ah ladilay muddadii howlgalladu ka dhacayeen gudaha dalka Mareykanka.